TAXI eto an-drenivohitra Tsy hampiditra fiara vaovao ny kaominina
Namontana Maty nodomin’ny Taxibe ilay mpikotrana vao maraina
Lehilahy iray manodidina ny 55 taona omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora no maty voahitsaky ny taxibe teo amin’ny làlana Rabotovao sy Rakotoarisoa Bernard akaikin’ny fiolanana etsy Soanierana miazo an’i Namontana.
TAXI eto an-drenivohitra Tsy hanaiky ny fanilihana ataon’ny kaominina
Nivory nandinika maika ny toe-java-misy iainany ankehitriny ny mpitantana ny fiara karetsaka eto Antananarivo renivohitra ny faran’ny herinandro teo notarihin’ny filohan’ny FTAR Raharinirina Clemence.
Fanamboaran-dalana ao Menabe Hahazo ny anjarany ny distrika rehetra
Nanomboka ny zoma teo ny fanamboaran-dalana andiany faharoa ao aminy Faritra Menabe.
Mahajanga Mpitondra moto miisa15 tratra tsy nanao aro loha
Mbola betsaka ireo olona mitondra moto tsy manao aro loha ho fiarovana ny ainy. Miisa 15 tamin’ireo 55 nosavaina sy nanaovana fanentanana no tratra tsy nanara-dalana ny sabotsy teo,
Zaza 3 taona vofaokan’ny môto Maty tsy tra-drano, nivoaka ny betron-dohany
Zazalahy 03 taona nirava nianatra no maty teo noho eo voafoakan'ny "môto" tao Betoloha Ambandrika, ao anatin’ny distrikan’Ambandrika
Alaotra Mangoro An-dalana ny asa fanamboarana ny RN44
Efa miditra amin` ny vanim-potoam-pahavaratra isika izao. Mitebiteby fatratra ny mpampiasa ny lalana RN 44 mampitohy an’ Ambatondrazaka sy Moramanga amin’izao fotoana izao, noho ny fahasimban’ ity lalana ity.
Amboditsiry Maty nodomin’ny moto ilay mpangataka
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona iray teny Amboditsiry teo akaikin'ny Lapara Pharmacie ny 8 oktobra teo.
Saika mivarotra ny taxi-any avokoa ireo tompona fiara mampiasa izany eto an-drenivohitra amin’izao fotoana izao no sady manao varo-boba.
Raha araka ny tsaho niparitaka tao anaty tambajotran-tserasera facebook mantsy dia hampiditra fiara vaovao maro sy mitovy ny kaominina Antananarivo renivohitra mba hanoloana azy ireny. Nanitsy io vaovao niely io sy nilaza ny tena marina araka izany ny solontena avy eo anivon’ny FTAR ka nambarany tamin’izany fa tsy manam-pikasana ny hanao izany mihitsy ny kaominina. Miantso ireo mpampiasa fiara karetsaka eto an-drenivohitra araka izany ny FTAR mba tsy ho taitaitra. Anisan’ny tena imasoan’izy ireo ankehitriny ny fanovana ho nomerika ny licence izay nomarihiny ihany fa tsy handoavam-bola na Ar aza. Toraka izany koa ny ady amin’ny taxi moto sy ny bisikileta izay manimba ny asan’izy ireo. Ho an’ireo manana taxi mbola tsy misoratra amin’ny anarana kosa anefa dia tokony hanao ny mutation faran’izay haingana izy ireny hahazoany ny tombontsoa rehetra. Miisa 4.727 moa ireo taxi miasa eto an-drenivohitra ankehitriny.